Faritra arovana Tsinjoriake: ho an’ny fambolena, ny fitaterana, ny fizahantany - ewa.mg
Faritra arovana Tsinjoriake: ho an’ny fambolena, ny fitaterana, ny fizahantany
News - Faritra arovana Tsinjoriake: ho an’ny fambolena, ny fitaterana, ny fizahantany
Nofaritan’ny Banky afrikanina momba
ny fampandrosoana (Bad) ho fototra iray lehibe ho an’ny
fampandrosoana eto Madagasikara ny any Atsimo Andrefana. Maro ny
fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’ny Bad any an-toerana, toy ny
fikajiana ny tontolo iainana. Nofaritana tamin’ny 2015 ny faritra
arovana Tsinjoriake, hampiroboroboana ny seha-pihariana
isan-karazany. Mitantana io faritra io, ahitana ny tendrombohitra
Andatabo, ny fikambanana Tamia.
Fanadihadiana lalina ny nanaovana
ny faritra arovana Tsinjoriake mifandray amina tetikasa momba ny
fambolena sy ny fiompiana napetraky ny Bad, misy ny lalam-pirenena
RN7, Antananarivo-Toliara (980 km). Lalam-pirenena mampifandray
faritra maro: Analamanga, i Vakinankaratra, Amoron’i Mania, i
Matsiatra Ambony, Ihorombe, ary Atsimo Andrefana, misy ny
seranan-tsambo. Mifandray sy mifampiankina ny fambolena sy ny
fiompiana, ny fitaterana, ny fizahantany.
“Anisan’ny mampihodina ireo sehatra
ireo ny faritra arovana Tsinjoriake. Tsy hita taratra eo amin’ny
fandrindrana fomba fiasa amin’ireo minisitera miandraikitra ireo
sehatra telo anefa izany ny laminasan’ny Bad izany”, hoy ny
mpikaroka ao amin’ny Tamia.
L’article Faritra arovana Tsinjoriake: ho an’ny fambolena, ny fitaterana, ny fizahantany a été récupéré chez Newsmada.
Misy ireo manipy fanakianana mavaivay an’ireo izay nanao fanahy iniana tsy nandeha nandatsa-bato, afak’omaly. Toa mbola diso ihany koa, raha ny filazan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ireo mpifidy afaka nanatanteraka ny adidiny tamin’ny fifidianana filoham-pirenena saingy voasakan’ny lesoka samihafa. Homen-tsiny kosa ve ireo nahavita ny adidiny saingy azo inoana sahady fa hitora-bato an’ireo solombavambahoaka hahazo seza, eny Tsimbazaza, atsy ho atsy. Samy manana ny famaritany ny atao hoe lafatra ny tsirairay sady malalaka ny fanehoan-kevitra raha hanombana ny kalitaon’iny fifidianana solombavambahoaka iny. Miteny ho azy, na tiana na tsy tiana, ny tahan’ny fahavitrihan’ny mpifidy. Azo afangaro ao daholo ny fahalainan’ny olom-pirenena sy ny tsy fahatomombanana isan-karazany hatramin’ny hafokan’ireo kandidà, miampy ny goragora amin’ny fampanarahan-dalàna eto amin’ity firenena ity. Hatreto aloha dia mendrika an’izay solombavambahoaka iraika amby dimampolo amby zato miandahy miambavy eny amin’ny Antenimierampirenena isika. Tsy maintsy mbola ho adin’ny mpiaro fahefana an-jambany sy ny bontolon’ny mpanozongozona fitondrana indray no hanjaka. Aza afatratra any amin’ny tsy fitiavan’ny olom-pirenena maro ny resaka politika intsony ny rihitra fa efa porofo diso mitohoka amin’ny tenda loatra ny zava-nisy tamin’ireo fifidianana intelo miantoana, dia ny fihodinana indroa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena sy ity fifidianana solombavambahoaka ity. Vitsy loatra ny kandidà mendrika hofantenan’ny vahoaka. Ireo tsimatimanota hatrany anefa no mibahana ny kianja satria marefo ny lalàna tokony hanenjika azy ireo. Tsy tsapatsapa vodin’akoho akory no miandry amin’ny fifidianana fa toy ny terena hitsoboka any anaty lava-piringa ny olona: maloto avokoa no tazan’ny maso. Hazoto amin’ny lafiny rehetra izy rehefa iainantsika eto amin’ny firenena ny fahadiovana miainga any ambony hatrety ambany. Mandra-piandry izany aloha, hafana indray ny fifampitorohana sy fifampitoriana etsy sy eroa amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Toy ny mahazatra hatramin’izay, saingy miha mamohehatra! L’article Safidy manadala est apparu en premier sur AoRaha.
Pilo kely #4454 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4454 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy nisy nipetraka teo amin’ny toeran’ny Talen’ny Spaoro Federaly, noho ny fanendrena an-dRakotozafy Rosa (nitantana izany departemanta izany teo aloha), ho Tale Jeneraly ny Spaoro (DGS), roa volana izay. Araka ny loharanom-baovao, antontan-taratasy maro no voaray teny anivon’ny Ministera ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Raha ny fanadihadiana natao anefa, ny telo amin’izy ireo ihany aloha no tena fantatra, isan’izany i Finaritra, am-perinasa eo anivon’ny Mjs ary lehibena sampan-draharaha eo anivon’ity Minisitera ity ihany koa. Saika hita matetika hatrany izy, mandritra ny hetsika ara-panatanjahantena, indrindra ny fifidianana eny anivon’ny federasiona, toy ny teo anivon’ny federasiona malagasy taranja volley-ball, natao tany Toliara. Mbola tazana ihany koa ny tenany, tamin’ny fifidianana Taekwondo ary ny taranja Tolona, natao tany Mahajanga. Azo lazaina ho efa nandray an-tanana ny asa fanaon’ny DSF i Finaritra raha ireo efa vitany ireo no jerena.Andrianantenaimanantena Davidson Mickaël, kandidà ho amin’ity toerana ity ihany koa. Tale Teknika Nasionalin’ny taranja Savate ny tenany izay manana ny fahaizana sy afaka mandray ity toerana ity. Isan’ireo mpitarika ny tolona teny anivon’ny sendikalin’ny mpampianatra fanatanjahantena an-tsekoly Andriamatoa Davidson.Farany, ramatoa Andriamanjatoarimanana Tojohanitra, hifaninana amin’ny toeran’ny DSF ihany koa. Ankoatra ny maha olympien ny tenany, filohan’ny ligin’Analamanga ny taranja Lomano i Tojohanitra amin’izao fotoana izao. Araka ny nambaran-dRamatoa Rosa, tamin’izy voatendry ho Tale Jeneraly, faniriana raha toa ka vehivavy ihany no hipetraka eo amin’ny toeran’ny DSF. Tsara toerana, araka izany, i Tojohanitra.Marihina, ny Minisitra miaraka amin’ny Sekretra jenaraly sy ny DGS no manao ny fanadihadiana hahafahana manendry izay ho Talen’ny Spaoro federaly. Alefa eny anivon’ny governemanta ny anaran’izay lany avy eo, hodinihina amin’ny filankevitry ny Minisitra. Mi.RazL’article MJS – Talen’ny Spaoro federaly (DSF): kandidà telo no tena misongadina a été récupéré chez Newsmada.
Maty tany amin’ny hopitaliben’i Mahajanga ity tovolahy iray, roapolo taona, voatsindron’antsy tao Andranomavo Mitsinjo, ny alin’ny zoma lasa teo. Lehilahy roa no fantatra fa tompon’antoka tamin’izao vono olona izao. Efa voa- sambotra ireo voarohirohy ary natao andrimaso mialoha ny fiatrehana ny fakàna am-bavany. L’article Tsindron’antsy est apparu en premier sur AoRaha.
Anjohy : Nirehitra ny « grenier »
Nisahotaka ny olona, omaly, raha nahita ny firehitry ny afo tao amin’ny trano lehibe iray misy rihana roa ary fitoeran’entana any amin’ny farany ambony. Teo ampitan’ny tsena eo Anjohy no nitranga izany hain-trano izany. Niantso ny mpamonjy voina ny manodidina, tokony ho mitataovovonana ary fiara lehibe telo mpamono afo no indray tonga teny an-toerana. Novakiana ny « plafond » ary notifirina rano avy taty ambany. Tsy naharitra dimy minitra akory dia voafehy tanteraka ny afo. Tsy nisy ny aina nafoy na naratra, raha araka ny fanazavan’ny mpamonjy voina avy etsy Tsaralalàna. Niainga avy tamin’ny lakozia kely tany an-tokotany ny afo ary mety ho nentin’ny rivotra tao amin’ilay fitoeran’entana tany ambony indrindra. Izay aloha hatreto ny tombana, ny amin’ny mety ho niaingan’ny loza. Ambony toerana rahateo Anjohy ka mora mahazo rivotra izay nampiledaleda vetivety ny afo. D.RL’article Anjohy : Nirehitra ny « grenier » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mafanafana ratsy ny fampielezan-kevitra. Miseholany ny teny tsy tsaroana afitsoky ny sasany, ny famohazana fota-mandry, ny fanaratsiana… Ady farany fandresen-dahatra izao. Iza no handresy? Arakaraka ny safidin’ny besinimaro na ny maro anisa io. Nefa miankina be dia be amin’izay atolotry ny kandidà tsirairay avy ny fironana sy ny fanapahan-kevitry ny mpifidy. Izay ilay hoe inty sy inday, tolotra sy tinady. Tena mifanandrify amin’izay zava-dehibe sy mahamaika ny vahoaka ve, ohatra, ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharanasa andresen-dahatra azy? Tsy itompoana teny fantatra, na atao savoandanitra, na letrezana… Izay miainga amin’ny zava-misy sy ny hetahetan’ny vahoaka ifotony no mety handresy lahatra azy: ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fandrobana tany, ny kolikoly… Manginy fotsiny ny raharaham-pirenena tsy ananan-kavana. Mba tsy hoe lasa fananana manokan’ny mpitondra i Madagasikara, ka manjakazaka ny tapaka sy namana: tsimatimanota, velon’ny kiantranoantrano… Inona ary aiza izay tena vahaolana mahomby sy maharitra amin’izany? Eo koa ny fivarotan-tanindrazana, ny fandroban’ny vahiny ny harem-pirenena… Hisy ve ny fiovana sy fanovana? Mila mazava amin’ny vahoaka ifotony ny amin’izany, ankoatra ny fandaharanasa hafa. Tsy misy na mila tambiny hafa izay vato harotsaka amin’izany, afa-tsy ny asa mivaingana rehefa voafidy eo ny tena. Tokony ho izay koa no antony fototra amin’ny safidin’ny tsirairay, arakaraka ny tolotra sy ny tinady. Ny fandaharanasa no hanolorana vato, fa tsy tsangan’olona, na fanomezana, na kabary tsara lahatra… Tsy noterena ireo mirotsa-kofidina; eny, na toy inona fanazavan-kevitra ny amin’izay. Tsy azo terena amin’ny safidiny koa ny tsirairay, manana izay zava-dehibe sy mahamaika azy: tsy voatery na terena hitovy sy hifanandrify amin’ny an’ny kandidà. Eo ny maha fifanarahana ny fifidianana, tsy vitan’ny latsa-bato sy ny fahazoana fahefana fotsiny fa hitakiana tamberin’andraikitra atsy ho atsy. Rafaly Nd. L’article Arakaraka ny tolotra sy tinady… a été récupéré chez Newsmada.